ओलीलाई साथ दिने जसपका ठाकुर-महतो पक्षमा यति थोरै हस्ताक्षर संकलन , ओली आउट हुने पक्का ! - Rising Dainik
ओलीलाई साथ दिने जसपका ठाकुर-महतो पक्षमा यति थोरै हस्ताक्षर संकलन , ओली आउट हुने पक्का !
May 4, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on ओलीलाई साथ दिने जसपका ठाकुर-महतो पक्षमा यति थोरै हस्ताक्षर संकलन , ओली आउट हुने पक्का !
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले आफ्ना सांसद र कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने दिन नजिकिंदै गर्दा गरिएको हस्ताक्षर संकलनलाई अर्थपूर्ण ठानिएको छ ।
जसपाको कार्यकारिणी समिति ५१ सदस्यीय छ । त्यसमध्ये २८ जना उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्षतिर देखिएका सो पार्टीका नेताहरु बताउँछन् । यादव र भट्टराई पक्षले यसअघि नै आफू निकटका नेताहरुको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको छ ।
यसैगरी जसपाका ३४ जना सांसदहरुमध्ये दुईजना नि’लम्बनमा परेपछि हाल ३२ सांसद छन् ।
सत्ता समीकरणका विषयमा जसपामा दुई धार छ । ठाकुर र महतो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नजिकिएका छन् भने यादव र भट्टराई ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही वैशाख २७ गते विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा कडाइसाथ एक साता नि’षेधाज्ञा लम्ब्याइने घोषणा , यस्तो छ तयारी
घरमै परीक्षा गराएर शुल्क उठाउदै निजी विद्यालय
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज : वि.सं.२०७७ साल फागुन १३ गते बिहीबार हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
केपी शर्मा ओली एसियाकै प्रभावशाली र दूरदर्शी नेता अवार्ड बाट सम्मानित
‘आउनुहोस् ,सँगै काम गरौ’ – रवि लामिछाने
March 19, 2021 March 19, 2021 Ramash Kunwar